VaObama naVaRomney Vokweshana neChipiri Musarudzo yeMutungamiri weAmerica
VaMitt Romney naVaBarack Obama
WASHINGTON — Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama veDemocratic Party, vari kukwikwidzana neChipiri naVa Mitt Romney veRepublican Party, musarudzo yekutsvaga mutungamiri mutsva weAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwe enyika dzinoti sarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino haisati yamboitika munhoroondo yesarudzo dzemuAmerica.
Nyanzvi idzi dzinoti vaviri ava vari kuratidza vose kutsigirwa zvakasimba zvokuti anokunda musarudzo iyi, anogona kutadza kuwana zvigaro mazana maviri nemakumi manomwe zvinodiwa kuti agadzwe semutungamiri wenyika.
Munyika yose mune zvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere zvematare maviri eparamende.
Matunhu anonzi anonetsa zvakanyanya musarudzo yemutungamiri wenyika iyi matanhatu ayo ane zvigaro makumi masere nezvitatu. Matunhu aya anosanganisira Florida, Virginia, Ohio, Wisconsin, Colorado, neNew Hampshire.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti matunhu makumi mana kubva pamatunhu makumi mashanu ari kuratidza kutsigira zvakasimba mumwe mukwikwidzi pavaviri ava, pachisara matunhu gumi ayo asiri kuzivikanwa kuti anotorwa nani.
Kunyange hazvo VaObama vari kutungamira mumatunhu akawanda mumatunhu anonetsa musarudzo dzemuAmerica, VaRomney vari kuratidzawo kuti vane vatsigiri vakawanda mumatunhu iwaya.
VaRomney vapinda neMuvhuro mu Pennsylvannia vachitsvaga rutsigiro, dunhu rinogara rakavhorera bato reDemocratic.
Pamusoro pesarudzo yemutungamiri wenyika, vanhu vemuAmerica vachange vachivhotera zvakare zvigaro mazana mana nemakumi matatu nezvishanu, 435, zvenhengo dzeparamende yepasi, kana kuti House of Representative, pamwe nezvigaro makumi matatu nezvitatu zvedare reseneti. Dare reseneti rine zvigaro zana, asi zvimwe zvacho hazvisi kuvhoterwa.
Nyanzvi idzi dzinoto bato reRepublican Party riri kutarisirwa kuva nezvigaro zvakawanda mudare reparamende yepasi, ukuwo bato reDemocratic Party riri kutarisirwa kuwedzera zvigaro zvaro mudare iri kunyange hazvo zvichange zviri pasi pezvigaro zvebato reRepublican Party.
Asi vamwe vanotiwo bato reDemocratic Party rinogonawo kutora zvigaro zvedare reparamende zvakawanda, kana pachitariswa mafungiro ari kuita veruzhinji musarudzo iyi.
Kana varume vaviri ava vakaita mangange nezvigaro mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe pamunhu, mutemo wemu America unoti dare reparamende repasi ndiro rinosarudza mutungamiri wenyika, ukuwo dare reseneti richisarudzawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika.